WEERAR XOOGAN OO CAAWA KA DHACAY MAGAALADA KISMAAYO
Loading...	Home Wararka WEERAR XOOGAN OO CAAWA KA DHACAY MAGAALADA KISMAAYO
WEERAR XOOGAN OO CAAWA KA DHACAY MAGAALADA KISMAAYO	Friday, 30 November 2012 21:48	Bambo gacmeed ayaa lagu weeraray warshaddii Hilibka ee magaalada Kismaayo oo ku taala dhinaca waqooyi-galbeed ee magaalada.
Hal askari ayaa ku dhaawacmay sida uu noo sheegay askari kamid ahaa askartii goobta ku sugnayd oo magiciisa inaan xusno diiday.
Warshadda hilibka waxaa daggan ciidamo taabacsan dowladda waana xarun ciidan oo si weyn loo ilaaliyo.
Warshaddu waxay wajiga hore ku haysaa magaalada halka dhabarka dambe uu ka xigo dhul hawd ah (duur) oo laga soo weerari karo xerada.
Ma jirto khasaare intaas ka badan oo soo gaaray ciidamadii lagu tuuray bamka.
Waqtiga magaalada Kismaayo oo ah 08:30pm ayaa laga maqlayaa xaafadaha u dhow dhow xerada rasaas ay ridayaan ciidamadu, inkastoo aysan jirin cid u jawaabaysa.
Goobta iminka lagu tuuray bam-gacmeedka waxaa u dhow gurigii guddoomiyaha arrimaha bulshada oo isla bishaan dhamaadka taagan gurigiisa lagu weeraray bam gacmeed, waxaa ku dhintay hal askari oo ilaaladiisa ahaa qof kale oo shacab ahna wuu ku dhaamacay.
Al-Shabaab oo magaalada Kimsaayo ka daggan deegaanno aad ugu dhow magaalada ayaa markii uu aasku madoobaado dhinicii ay doonaan ka soo weerara Kismaayo, taasoo magaalada xaaladdeeda ka dhigaysa mid habeenkii laga cabsado maalintiina deggenaasho aan lugo adag ku taagnayn ku sugan.
Cali Cabdi-Yare Geesguud News Kismaayo